Baiboly pejy 29 - Ny Baiboly
Voalohany < 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Manaraka Farany
Jenezy toko 46 (tohiny)
15Ireo no zanakalahin'i Lià, naterany tamin'i Jakoba tany Padana-Arama, ary Dinà no zanany vavy. Telo amby telopolo no isan'ny zanany lahy rehetra mbamin'ny zanany vavy.
31Ary hoy Josefa tamin'ireo rahalahiny sy ny ankohonan-drainy: Handeha hampandre an'i Faraona aho, ary izao no holazaiko aminy: Tonga aty amiko ny rahalahiko sy ny ankohonan'ikaky, izay tany amin'ny tany Kanaana. 32Olona mpiandry ondry izy ireo, fa biby fiompy no fananany, ary efa nentiny avokoa ny ondry sy ny ombiny ary ny fananany rehetra. 33Koa raha antsoin'i Faraona hianareo, sy anontaniany hoe: Inona no raharahanareo? 34Dia valio hoe: Biby fiompy no fanananay, izahay mpanomponao, hatramin'ny fahazazanay ka mandrak'ankehitriny; tahaka ny razanay koa. Fa izany no hahazoanareo monina amin'ny tany Gesena, satria fahavetavetana amin'ny Ejipsiana ny mpiandry ondry rehetra.
Jenezy toko 47
Ny nandraisan'i Faraona an'i Jakoba - Ny nanapahan'i Josefa an'i Ejipta nandritra ny mosary.
1Dia nankany amin'i Faraona Josefa hilaza izany vaovao izany, ka hoy izy: Tonga avy any amin'ny tany Kanaana ny raiko sy ny rahalahiko mbamin'ny ondriny sy ny ombiny sy izay rehetra ananany; ka indreo izy ao amin'ny tany Gesena. 2Ary nitondra dimy lahy tamin'ireo rahalahiny izy ho eo anatrehan'i Faraona. 3Ka hoy Faraona tamin'ireo: Inona no raharahanareo? Ka hoy ireo tamin'i Faraona: Mpiandry ondry toy ny razanay ihany koa, izahay mpanomponao. 4Dia hoy koa izy tamin'i Faraona: Tonga aty izahay mpanomponao mba hitoetra amin'ity tany ity, fa tsy misy hanina intsony horaotin'ny ondrin'ny mpanomponao, fa mamely mafy ny mosary any amin'ny tany Kanaana. Koa aoka re mba havelanao honina eto amin'ny tany Gesena ny mpanomponao.
5Dia hoy Faraona tamin'i Josefa: Tonga atý aminao ireto ny rainao sy ny rahalahinao; koa indro eo anoloanao ny tany Ejipta; amponeno amin'izay tany tsara indrindra ny rainao sy ny rahalahinao. 6Aoka honina amin'ny tany Gesena izy. Ary raha mahita lehilahy mahay amin'izy ireo hianao, tendreo izy ho mpitandrina ny biby fiompiko.
7Nampanalain'i Josefa Jakoba rainy, ka nasehony an'i Faraona; dia nisaotra an'i Faraona Jakoba. 8Ary hoy Faraona tamin'i Jakoba: Firy taona ny andro niainanao? 9Ka hoy Jakoba tamin'i Faraona: Telo-polo amby zato taona no andron ny fivahiniako. Sady fohy no ratsy ny andro niainako, fa tsy nahatratra ny andro niainan'ny razako tamin'ny fivahiniany. 10Dia nisaotra an'i Faraona indray Jakoba, dia lasa niala teo anatrehany.
11Koa nampiorim-ponenana an-drainy sy ny rahalahiny Josefa ka nanome azy zara tany, eo amin'ny tany Ejipta, dia ny tsara indrindra amin'ny tany, ao amin'ny faritanin'i Ramsesa, araka ny teny nomen'i Faraona azy. 12Ary Josefa no nanome hanina an-drainy sy ny rahalahiny mbamin'ny ankohonan-drainy rehetra, araka ny isan-janany avy.
13Dia tsy nisy hanina intsony tamin'ny tany rehetra, fa mafy dia mafy ny mosary, ka najifa ny tany Ejipta sy ny tany Kanaana, azon'ny mosary. 14Lasan'i Josefa tamin'ny vidim-bary novidin'ny olona avokoa ny vola tany amin'ny tany Ejipta sy tany amin'ny tany Kanaana, ka nampidiriny tao an-tranon'i Faraona izany vola izany. 15Nony lany avokoa ny vola tany amin'ny tany Ejipta sy tany amin'ny tany Kanaana, dia nankany amin'i Josefa ny Ejipsiana rehetra nanao hoe: Omeo hanina izahay. Aiza ka dia ho faty eto anatrehanao izahay, fa tapitra ny volanay! 16Ary hoy Josefa: Rehefa lany ny volanareo, ny biby fiompinareo entina; hotakalozako hanina ny biby fiompinareo. 17Dia nentiny nankany amin'i Josefa ny biby fiompiny, ary nomen'i Josefa hanina izy ho takalon' ny soavaliny, sy ny andian'ondry aman'ombiny ary ny ampondrany. Nomeny hanina izy tamin'izany taona izany ho takalon'ny biby fiompiny rehetra.
18Nony tapitra izany taona izany, dia nankeo amin'i Josefa indray izy ireo, tamin'ny taona manaraka, nanao taminy hoe: Tsy hafeninay amin'ny tompoko, fa ny vola efa lany, ny andiam-biby fiompy efa lasan'ny tompoko avokoa; ny tenabenay sy ny taninay sisa eto imason'ny tompoko. 19Kanefa aiza ka dia ho faty eto anatrehanao izahay sy ny taninay! Takalozy hanina ny tenanay sy ny taninay, dia ho mpanompon'i Faraona izahay sy ny taninay. Ary omeo voa hafafy izahay mba ho velona fa tsy ho faty, ary mba tsy ho lao ny tany. 20Dia lasan'i Josefa ho an'i Faraona ny tany Ejipta manontolo; fa ny Ejipsiana samy nanakalo ny sahany avy, fa resi-mosary, any ka tonga fananan'i Faraona ny tany. 21Dia nafindrany ny vahoaka ho any amin'ny tanàna eran'ny tany Ejipta rehetra. 22Ny tanin'ny mpisorona no hàny sisa tsy lasany, fa nanana anjara hanina tamin'i Faraona ny mpisorona, ka nisy hivelomany, izay anjara nomen'i Faraona azy, izany no tsy mba nanakalozany ny taniny. 23Dia hoy Josefa tamin'ny vahoaka: Voavidiko androany ho an'i Faraona hianareo sy ny taninareo. Koa indreny ny voa hafafinareo dia fafazo ny tany. 24Rahefa tonga ny vokatra, ny ampahadiminy moa haterinareo ho an'i Faraona; ny efa-toko kosa misy hafafinareo amin'ny tany ary misy hivelomanareo sy ny ankohonanareo, sy hiveloman'ny zanakareo. 25Ka hoy ny olona: Hianao no namonjy ny ainay. Hahita fitia eo imason itompokolahy anie izahay ary ho mpanompon'i Faraona izahay. 26Dia nataon'i Josefa lalàna izany amin'ny tany Ejipta, ka mbola velona mandrak'androany, ka araka izany lalàna izany dia an'i Faraona ny ampahadimin'ny vokatry ny tany any Ejipta, fa ny tanin'ny mpisorona ihany no hàny tsy azy.
27Nonina tany Ejipta amin'ny tany Gesena Israely ka nahazo fananana tany izy ireo, ary nihamaro anaka sy nihabetsaka indrindra.
28Fito ambin'ny folo taona no andro niainan'i Jakoba tany amin'ny tany Ejipta. Ary fito amby efa-polo amby zato taona ny andro niainany rehetra. 29Nony efa akaiky ny fara andron'Israely dia nampaka an'i Josefa zanany izy, nanao taminy hoe: Raha mba nahita fitia teo imasonao koa aho, masìna hianao, ataovy ato ambany feko ny tànanao, ataovy amiko amin-kazavam-po sy fahamarinana izao: aza alevina atý Ejipta aho, 30fa raha avy izay hodiako mandry any amin'ny razako, ento miala atý Ejipta aho, ka aleveno any amin'ny fasan'izy ireo. Dia hoy ny navalin'i Josefa: Eny, hotanterahiko ny teninao.
Pejy: Voalohany < 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Manaraka Farany
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.3187 seconds